Alamino ny tranonao amin'ny fomba 20/10, fantaro izay misy azy | Bezzia
Alamino ny tranonao amin'ny fomba 20/10, fantaro izay misy azy
Pau heidemeyer | | an-trano
Raha te hahalala ny torohevitra tsara indrindra hanadiovana ny tranonao ianao, Ataovy ao an-tsaina foana ny fomba 20/10 ary raha tsy fantatrao izay misy azy, vakio hatrany fa holazainay aminao manaraka.
Raha manana fahatsapana manadio ny tranonao foana ianao ary "tsy vita", tianay hianaranao ny fahazarana tsara indrindra azonao ampiharina ao an-tranonao mba ho voalamina araka izay azo atao ny tranonao nefa tsy misy fiezahana.
Raha iray amin'ireo olona miala amin'ny fanadiovana mandritra ny faran'ny herinandro ianao ary izay tadiavinao dia ny hanana fotoana betsaka kokoa ary tsy mampiasa azy io hanadiovana ny trano, tianay ho fantatrao ity fomba 20/10 handaminana ny tranonao ity, ho fantatrao ny fiasan'izy io ary ho fantatrao ny antony ahombiazany manerantany.
Rachel Hoffman no mpamorona ity rafitra fanadiovana ity, fomba iray azon'ny olona maro atao ao an-tranony hahitany azy fa milamina sy madio kokoa. Samy afaka manantanteraka izany ny mpianatra roa tonta, toa ny olona velona izy ireo irery, Las mpivady na fianakaviana.
Ny tsy fitovizan'ny fifehezana nentim-paharazana hafa miaraka amin'ity fomba ity dia ny fomba ampifanarahana amin'ny olon-drehetra, satria na inona na inona toetran'ny olona dia azo tanterahina izany.
1 Inona ny fomba 20/10?
2 Ahoana no ahafahanao mampihatra ny fomba 20/10 amin'ny fanadiovana ny tranonao?
2.1 Makà sary alohan'ny sary sy sary aorian'ny
2.2 Ataovy isan'andro ny fandriana
2.3 Sokafy ny varavarankely
2.4 Manasa vilia
2.5 Diovy ny vata fampangatsiahana anao
2.6 Diovy ny toerana ho an'ny habaka lehibe indrindra
2.7 Manomboha manadio hatrany ambony ka hatrany ambany
2.8 Alao ny tany rehetra
3 Tombontsoa azo avy amin'ny fomba 20/10
Inona ny fomba 20/10?
Tsotra ny tolo-kevitr'i Hoffman, esory ireo andro fanadiovana tsy misy farany ary ovay mandritra ny fotoana fohy asa nifandimby nisy razambe. Izany hoe ity fomba ity dia mangataka antsika mba hanadio mandritra ny 20 minitra ary hiala sasatra mandritra ny 10.
Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mijery ny fotoana sy manisa ny ora, na mampiasa mivantana ny fiatoana famantaranandro mba hahazoana antoka fa manaraka tsara ireo minitra voatendry amin'izany asa izany ianao. Mandritra ny 10 minitra sisa ary miala sasatra, azontsika atao ny manamarina mailaka, mijery tamba-jotra sosialy, misotro dite na mijery horonan-tsary.
Rehefa maty indray ny fanairana dia mila miasa indray ianao mandra-pilamin'ny zavatra rehetra. Tokony hibanjina ny zavatra madinidinika ianao fa tsy amin'ny fikorontanana amin'ny ankapobeny, mila mandeha isaky ny teboka ianao.
Ahoana no ahafahanao mampihatra ny fomba 20/10 amin'ny fanadiovana ny tranonao?
Raha te hanatanteraka an'io modely io any an-trano ianao dia misy toro-hevitra vitsivitsy hahafahanao mampihatra azy isaky ny manana fotoana mety ianao.
Indraindray isika mahita ny korontana toy ny korontana lehibe ary mahakivy antsika. Tokony hifantoka amin'ny hetsika kely ianao mba handrosoana.
Makà sary alohan'ny sary sy sary aorian'ny
Raha maka sary eo am-piandohana sy any am-piandohana ianao dia ho hitanao tsara fa mendrika izany ny ezaka rehetra nataonao ary hanosika anao hanohy ny rafitra fanadiovana.
Ataovy isan'andro ny fandriana
Na dia heverinao fa manahirana be aza ny manao azy isa-maraina, dia hitondra soa bebe kokoa aminao izany, satria tsy dia maharitra ela akory ny fanaovana azy. Mampahery kokoa ny miverina indray mandeha fa hatory ao amin'ny efitrano madio ianao tsy efitrano fatoriana tsy mandamina.
Sokafy ny varavarankely
Ny rivotra ny trano dia tena zava-dehibe, tsy maintsy miditra rivotra isan'andro ianao mba hialana amin'ny fofona sy bakteria. Indrindra amin'ny ririnina, rehefa manadino ny manao azy isika satria mangatsiaka any ivelany.
Raha vantany vao vita ny sakafo dia tokony manasa lovia ianao, na dia mahazatra be aza ny hakamoana hanafika antsika ary te-hanao izany izahay any aoriana, na izany aza, dia fahadisoana ataon'ny maro izany. Andramo diovina ny lovia sy ny vilany, rehefa avy misakafo ianao. Ankoatr'izay, ny loto ao anaty lovia dia ho sarotra kokoa ny manala azy ary maimbo ny lakoziananao.
Diovy ny vata fampangatsiahana anao
Tokony hanadio vata fampangatsiahana mahazatra ianao mba hialana amin'ny sakafo ho lany daty, ao anaty aretina izany, sns. Tsy maintsy diovinao tsara ireo talantalana mba tsy maimbo ny vata fampangatsiahana. Mandehana mamaky ireo kaontenera rehetra, eny fa na dia ireo miafina any amin'ny farany aza toa hadino.
Diovy ny efitrefitra rehetra, avereno ny zavatra ary ataovy ireo izay ampiasainao indrindra amin'ny faritra mora azo indrindra.
Diovy ny toerana ho an'ny habaka lehibe indrindra
Raha manomboka amin'ny efitrano kely ianao dia atahorana ho reraka haingana kokoa ary tsy hanadio ireo toerana lehibe kokoa izay ampiasainao indrindra. Raha mifarana amin'ny efitrano lehibe indrindra ianao aloha, dia hahatsapa ho afa-po ianao ary miaraka am-panentanana bebe kokoa hanohizana.
Manomboha manadio hatrany ambony ka hatrany ambany
Fahadisoana atao dia ny fanadiovana ny gorodona aloha, ary avy eo ny talantalana. Na izany aza, tokony diovinao amin'ny talantalana hatreny amin'ny gorodona ny lalimoara avo indrindra. Ka ny vovoka sy loto izay mijanona eo ambany dia azonao diovina tsy misy olana.
Alao ny tany rehetra
Raha tsy milamina ny gorodona dia io no zavatra voalohany tokony hatao. Alao ny kitapo, kiraro, na inona na inona boaty misy anao, sns. Rehefa manomboka manadio ianao dia andramo hitazona ny toerany ny zava-drehetra mba tsy hanelingelina azy mandritra ny fanadiovana.
Tombontsoa azo avy amin'ny fomba 20/10
Nahita fomba hafa hanamboarana ny trano izahay, toy ny fanaovana marathon fanadiovana, izay ahitana ny tsy fampitsaharana ny fanadiovana sy ny fandaminana raha tsy milamina ny zava-drehetra. Izany, miankina amin'ny tranga sy ny haben'ny tranontsika, dia mety handoavana antsika iray andro amin'ny fanadiovana.
Ny zavatra ratsy indrindra dia raha manao azy amin'ny faran'ny herinandro isika, izay rehefa manana fotoana betsaka kokoa isika, miankina amin'ny tranga misy antsika, dia afaka mandany fotoana be dia be amin'ny fanadiovana ary rehefa tonga ny fiandohan'ny herinandro dia reraka isika.
Isaky ny mahavita marathon manadio isika dia manana fahatsapana ratsy manoloana ilay asa. Satria na dia mieritreritra ny hitazona filaminana aza isika, dia matetika no mitranga izany rehefa mandeha ny fotoana dia manatanteraka an'io hazakaza-maina io isika.
Anisan'ireo tombony omeny antsika ity fomba fanadiovana ity 20/10, tokony hijanona miaraka amin'ireto manaraka ireto isika:
Ataontsika madio ny trano amin'ny alàlan'ny fanaovana kely isan'andro tsy misy adin-tsaina., toy izay mamela ny korontana sy ny loto hanangona.
Satria rafitra fanadiovana tafiditra ao izy io, dia mety ho an'ny olona izay mijaly karazana fanaintainana na kilema ara-batana.
Farany, hamorona fahazarana manadio tsara isika raha ataontsika mandritra ny fotoana fohy isan'andro izany. Tadidio fa mila 21 andro ianao hananganana fahazarana izay azonao tazomina isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Alamino ny tranonao amin'ny fomba 20/10, fantaro izay misy azy
Vaovao momba ny literatiora: tantaram-piainana, tantaram-piainana ary ny sarin'ny fiainana iray
Toy izany no mampavitrika ny atidohanao nefa tsy mila kafe